Isiguli sikhala ngokunganakwa e-Edendale ngoba kuthiwa ‘siyazitshela’ | News24
Isiguli sikhala ngokunganakwa e-Edendale ngoba kuthiwa ‘siyazitshela’
ISITHOMBE: sithunyelwe UMnu Lungelo Ndlela othi akanakwanga esibhedlela e-Edendale ngoba kuthiwa uyazitshela.
UKHALA ngesihluku sabahlengikazi owesilisa wase Snathing onganakwanga esibhedlela i-Edendale ngoba kuthiwa ‘uyazitshela’.
UMnu Lungelo Ndlela owalimala engozini yemoto endaweni yakwaNoshezi ngeledlule uthe nakuba uyaphila namhlanje usizwe esinye sezibhedlela ezizimele sakuleli dolobha, emva kokuba ejike esengaphakathi e-Edendale yize wayopha kakhulu.
Elandisa iphephandaba i-Echo uNdlela uthi wafika esibhedlela ngoMsombuluko entathakusa ehambisana nabanye abathathu ayelimele nabo engozini yemoto, kodwa yena elimele kakhulu.
Uthe bathi befika bayalelwa ukuthi baye e-Specialist Out-Patient Department (SOPD) lapho kwafike kwathiwa akahambe ayovula ifayela yize babembona ukuthi nezimpahla azigqokile zazigcwele igazi.
Uthe: “Sithe sisahleli lapho ngacela amaphilisi ezinhlungu ngoba umzimba wawuqaqamba. Omunye wabahlengikazi wathi ngeke ngiwathole amaphilisi ngingakayivuli ifayela. Kwenzeka konke lokhu abahlengikazi bayaxoxa, iziguli zihleli emabhentshini akekho ozinakile. Ngithe uma ngibatshela ukuthi izinhlungu ziyangiqinisa, omunye wabo ngamuzwa ethi angiyi ngani ezibhedlela ezizimele ngoba ngiyazitshela, ngiphakeme.”
UNdlela uthe emva kokuzwa lokho ube esebuza yena lo mhlengikazi ukuthi isibhedlela singakwazi yini ukumtholela i-ambulense ezomthutha imyise kwesinye isibhedlela esizimele, owaphendula ngokuthi kuzomele azitholele yena imoto ezomhambisa. Uthe emva kokuzwa lokho akabange esapholisa amaseko, wafonela omunye walabo ayehamba nabo owayeyomvulela ifayela, wacela ukuthi abuye ukuze bamhambise kwesinye isibhedlela.
Uqhube ngokuthi okumkhathaza kakhulu ukuthi yize babembona ukuthi usezinhlungwini futhi uyopha, abamshayanga ndiva.
“Ngiwumhlengikazi nami, into engiyaziyo ukuthi into yokuqala uma umuntu efike elimele uyahlolwa ngokuphuthuma ukuze kutholakale ukuthi ukulimala kwakhe kubucayi noma into esengalinda. Baningi abantu behlukemezeka ezibhedlela bengakwazi ukuzikhulumela, sengikhulumela nabo. Indlela engangilimele ngayo, kwakungenzeka noma yini njengoba kwathinteka nomgogodla,” kusho yena.
Uthe yize engawathathanga amagama abahlengikazi, angabakhomba okuyibona ababesebenza ngalolo suku. Kuze kwashaya iskhathi sokushicilela uMnyango wezeMpilo ungatholakalanga ukuphawula